Waa ay adag tahay in ay doortaan kaliya 5 Maalinta Easy safarada From Milan By tareenka si ay u share aad la. Magaalada caasimada talyaaniga waa mid qurxoon ikhtiyaariyada dalxiis booqashada. Ma aha oo kaliya waxaa ka buuxda fashion, laakiin waxa ay leedahay taariikh cajiib ah, naqshadaha, iyo muuqaal qurux badan to write home about.
Waxaad dhammaan doontaa ilaa magaalada Swiss of St. Moritz, mid ka mid ah ugu jiga buurta caanka ah ee Switzerland. This is where the rich and famous spend their holidays or own a chalet.
St. Moritz dhigaysa saldhig kaamil ah si ay u sahamiyaan koonfureed ee Kantoonka ee Graubünden. Ma aha saldhig wanaagsan safarada maalintii qaybaha kale ee Switzerland, sida in qaadan lahaa oo aad u badan waqtiga safarka. waa, si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah hogaanka 5 Saffarada Day From Milan By Tareen in kastoo! ka cawayska ee magaalada Marka laga reebo, hawlaha ugu muhiimsan ee halkan waa dibadda. Haddii aad jeclaan tug, baaskiilka, ama isboortiga qaboobaha, aad naftaada ku raaxaysan kartaa toddobaad ee gobolka this cajiib ah.
Raaco Tariin ka hooseysa in ay dusha sare ee magaalada, iyo eegno taxadiri weyn Bergamo ee, sida St ah. Maria Maggiore Cathedral iyo Chapel Colleoni ah.
Last, laakiin ma ugu yaraan, ha iloobin inaad daqiiqad ku qaadato inaad ku qanacdo hareeraha cajiibka ah ee Bergamo, la hills iskala for miles, oo dhan si ay fog Lake Como hoos ku.
Gobolka Franciacorta waxay bixisaa qaar ka mid cajiib ah, khamri abaalmarin ku guuleystay si aad u tijaabiso, in ka mid ah muuqaal qurxoon Talyaani.
The aagga Franciacorta DOCG ka kooban yahay oo ku saabsan 3,000 hektar geed canab ah oo daboolaya xoogaa dhul dabiici ah oo is rog rogaya oo ku yaal koonfurta harada yar yar ee Iseo ee dalka Talyaaniga Lombardy. Tani waa masaafad candhuuf of badan oo kale oo caan Talyaani gobollada khamri, sida Piedmont galbeed iyo Conegliano Valdobbiadene (guriga ee premium super Prosecco) to the east.
Our liiska 5 Saffarada Day From Milan By Tareen ma noqon doono dhamaystiran oo aan ku jiraan Venice! Maxay noqon karaan waxa ka khayr badan qaadashada safarka maalinta ka Milan ah in mid ka mid ah magaalooyinka jaceyl Italy ayaa inta badan qiimeeyeen, Venice? In kastoo ay adag tahay in ay ku habboon oo dhan Venice farxaan galay hal maalin oo kaliya, dhab ahaan waxaad isku dayi kartaa.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Maalinta Easy From Milan By Tareen safarada” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-milan-train%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Bergamo comolake Daytrips YurubByTrain milan tareen safarka Talooyin safarka tareenka travelvenice